ललिता निवासको जग्गा बैंकमा राखेर यती बैंकबाट ४९ लाख ऋण लिएको खुलासा! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
ललिता निवासको जग्गा बैंकमा राखेर यती बैंकबाट ४९ लाख ऋण लिएको खुलासा!
काठमाडौं- ललिता निवासको सरकारी जग्गा किनेका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलेका छोरा नविन पौडेलले सो जग्गा साविक यती डेभलपमेन्ट बैंकमा राखेर ४९ लाख ऋण लिएको खुलासा भएको छ। साविकको यती डेभलपमेन्ट बैंक हालको महालक्ष्मी विकास बैंकसँग म’र्ज भएको थियो।
ललिता नि*वासको सरकारी जग्गा भू’माफियासँगको मि’लेमतोमा व्यक्तिगत बनाएको सार्वजनिक भएसँगै नेकपा महासचिव पौडेलले समेत ८ आना जग्गा छोराको नाममा कि*नेको खुलेको थियो। सोही जग्गा बैंकमा राखेर उनले ऋण निकालेका हुन्।
पौडेलले ‍ललिता नि*वासको र’जिष्ट्रेसन नम्बर ४१७ ‘क’को जग्गा धि’तोमा राखेर कर्जा लिएको फेला पारेको द’स्तावेजमा उल्लेख छ। उनले २०७० कात्तिक ४ गते ऋण लिएका थिए। पौडेलले जग्गा फिर्ता गर्न रा’जी भएको भन्दै अ*ख्तियारले उनलाई प्र’तिवादी बनाएको छैन। अख्तियारले सो जग्गा सरकारको नाममा ल्या’उन नि’र्देशन भने दिइ*सकेको छ।
Previous डर कोरोनाको, संक्रमण इन्फ्लुएन्जाको
Next यस्तो बेलापनि रवि लामिछाने आएनन् भन्दै पुण्य गौतमले यसरि गरे गुनासो (भिडियो)